စုန်းမတွေကဘာကြောင့်လကိုညှဉ်းဆဲတာလဲ။ အဆိုပါ MEME ဥပမာနှင့်အတူရှင်းပြသည် - သတင်း
TikTok မှကလေးစုန်းမများကလကို hex လုပ်ရန်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယူပြီးရိုးသားစွာဖြင့်ငါကဒါကိုရူးသွပ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လ hexing စုန်းငါငါနေ့ရက်ကာလအဘို့အချွတ်အစာကျွေးခြင်းနှင့်ငါနေဆဲအပြည့်အဝမပေးပါဘူးကြောင်း memes တစ်ခုလုံး catalog မှုတ်သွင်းပါပြီ။ သို့သော် ဦး စွာရှင်းပြပါရစေ။ သင်သည်ယခုအပတ်တွင်တွစ်တာသို့ဝင်ရောက်ပြီးလကို hexing စုန်းမများနှင့်ပတ်သတ်သည့် tweets များစွာကိုတွေ့ခဲ့ရပေမည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်သတိမရှိဘဲအတိတ် scrolled, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး hexed လ (သင်တစ် ဦး hexed လပုံမှန်အစည်းအဝေးလနှင့်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားနိုင်သလဲ) ကိုနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး, ဒါပေမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်တော်တော်ရှုပ်ထွေးနေကြသည် ကျနော်တို့ memes မတိုင်မီရဲ့အစစ်အမှန်အမြန်ကတဆင့်လမ်းလျှောက်ကြပါစို့။
လ hexing ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
သငျသညျ hexing ကဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားနေလျှင်ပထမ ဦး စွာ, ပယ်? ထို့နောက်ရဲ့ဖြေရှင်းရန်ကြကုန်အံ့။ Hexing စာသားပဲတစ်ခုခုအပေါ်တစ် ဦး စာလုံးပေါင်းချ။ , ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်စုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Hexing သည်များသောအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောစာလုံးပေါင်းဖြစ်ပြီးစုန်းမများကဥပမာအားဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်လကိုရွေးချယ်သည့်ဘာသာရပ်တွင်စွမ်းအင်စီးဆင်းစေသည်။ ဤ TikTok စုန်းမများသည်မိမိတို့၏လကိုကြည့်ရုံသာမကပါ။ သူတို့ဟာ Fairy ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ် (ဒါမှမဟုတ်နတ်သမီးပုံပြင်တွေအပေါ်အခြေခံထားတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်)၊ သူတို့ရဲ့နောက်ပစ်မှတ်ကတော့နေဖြစ်တယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲသွားပါသို့မဟုတ်ငါထင်သည်အိမ်သို့ပြန်သွားပါ။ သို့သော် Icarus အမျိုးအစားအခြေအနေတွင်၎င်းသည်အနံ့ခံနိုင်သည်။
လသည်စုန်းမများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏စာလုံးပေါင်းနှင့်စွမ်းအားကိုလောင်စာဖြစ်စေသည်။ သို့သော် hexing သည်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လကို pissing လုပ်ခြင်းသည်ကောင်းသည်မဟုတ်လော။ စုန်းမအတွက်လား ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်လား အတိအကျ သူတို့ကလရဲ့ hexing အတွက်ဒီကလေးစုန်းမှာစုန်းလုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များဖြစ်ကြတယ်၊ သူတို့ဟာ Artemis (လ၏ဘုရားသခင်) နဲ့သူ့အစ်ကို Apollo (နေ၏ဘုရား) ကို pissed လုပ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါတစ်ခုအတွင်းကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးကိုထိန်းချုပ်ထားသောနေနတ်ဘုရားမ၏အစ်မအားဤအတွေ့အကြုံမရှိသောကလေးစုန်းမများကအလွန်စိတ်ရွှင်လန်းစေသောကြောင့်စုန်းမများသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ နေကဤကပ်ရောဂါကိုအဘယ်ကြောင့်ထိန်းချုပ်ထားသနည်းသို့မဟုတ်လသည်ပထမနေရာ၌ hexed ဖြစ်ရခြင်းကိုဘုရားသခင်သိသည်၊ သို့သော်တစ်ခုမှာသေချာသည်မှာ - စုန်းမ၏အသိုင်းအဝိုင်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အချို့သောကောင်းတဲ့လ hex memes နှင့်အတူအားလုံးရူးသွပ်မှုကနေအေးဆေးကြကုန်အံ့, ငါတို့ရကြမည်နည်း
၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ည ၁၀ နာရီ ၃၈ မိနစ်တွင်လသည် hex ကိုအဘယ်ကြောင့်စုန်းကုန်းသည်အဘယ်သူဖြစ်ကြောင်း googling me pic.twitter.com/WwwlrjqY2Z
- kd (@kdmcteigue) ဇူလိုင်လ 20, 2020
ငါနဲ့ကောင်လေးတွေကလကို unxx လုပ်ဖို့စာလုံးပေါင်းချနေကြတယ် pic.twitter.com/izKu2xdaZa
- ဂျူလီ (@Julian_Epp) ဇူလိုင်လ 19, 2020
သူတို့တကယ်လ hex လုပ်ခဲ့တယ် bro pic.twitter.com/9o7FWvjEx5
- iebSiebers ️‍ACAB️‍ (@Siebersboy) ဇူလိုင်လ 20, 2020
4. စုန်းမသည်ငါအလွန်အကာအကွယ်ရှိပါတယ်, ငါသင်ယူတယ်
tiktok မှကလေးစုန်းမတွေရှာတွေ့တုန်းကလကို hex လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် pic.twitter.com/aFjymdC0QM
- မြောင်းစုန်း (@vvitchymama) ဇူလိုင်လ 21, 2020
လကို hex ရန်ကြိုးစားနေသောစုန်းမများသည် Anon David Lynch အားဝိညာဉ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲရန်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရချိန်ကိုသတိရစေသည် pic.twitter.com/ZE6lvVOdCn
- ရေမွန်ခေါက်ဆွဲ (@WandlerChillums) ဇူလိုင်လ 19, 2020
6. ဒါကငါကရယ်စရာင်ထင်တဲ့ meme မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုန်းမလို့တောင်မထင်ဘူး၊ ကိုယ့်ဘာသာပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဘာထင်တာလဲ အဘယ်ကြောင့်? မဟုတ်ဘူး။ FAE လွဲချော်နေကြသည်။ လ DEITIES pissed ။
သငျသညျ fae- hex ဖို့ကြိုးစားနေများအတွက်မျိုးဆက်အသွေးကျိန်ခြင်းရှိသည်လိမ့်မယ်
- 𖧵⁷sarah✨ (@strawberriyooni) ဇူလိုင်လ 19, 2020
ကိုယ့်လ hex didnt ။ ကိုယ့်လပေါ် cum didnt ။ ကိုယ့်ဒစ်ကိုလအနီးနားမှာမထားခဲ့ဘူး ငါလနှင့်အတူလိုက်တယ်ဘာမှပြုမိပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပေးပြီးသားလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲတောင်းပန်စာဗီဒီယိုများပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီဟာကိုဖြစ်နိုင်သမျှတိုတိုနဲ့ရိုးသားဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။
-“ Matt” (@Hitoshura) ဇူလိုင်လ 19, 2020
ငါ၏အ tl အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, အညီအမျှခွဲဝေသင်လကို hex လို့မရပါဘူးစုန်းကအတုကြောင့်နှင့်လလအခုအချိန်မှာလွန်းအစွမ်းထက်စခန်းများနေသောကြောင့်သင်လ hex လို့မရပါဘူး
- မြက်ခင်းပြင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူ (@antihoa) ဇူလိုင်လ 19, 2020
ငါ ya ပြောပြ binches
မေးခွန်းတစ်ခုကိုလ hex ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ခွေး: pic.twitter.com/StPxLJCJsG
- ֎ inigo @ (@homosexie) ဇူလိုင်လ 20, 2020
၁၀။ ပိုဆိုးအောင်လုပ်ပါ - ဥလူသား
မှန်ပါတယ်, ငါတစ် ဦး HEX တစ် ဦး ကိုတင်! pic.twitter.com/tuC6jRNvmP
- မကောင်းသော EGG (@BadEgg_Official) ဇူလိုင်လ 19, 2020
လွမ်။ မဟုတ်ပါ, စုန်းမ hex ခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်? ငါလခိုးယူသောကြောင့် မင်းရဲ့အဖိုးတန်လကိုနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုဒေါ်လာ ၃၀၀,၀၀၀ ကြိုးပေးလိုက်ပါ။ ငါ့ကိုမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
- ဝိဇ္ဇာအတတ် (@MNateShyamalan) ဇူလိုင်လ 20, 2020
၁၂။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခုဒီ shit က ridonkulus ကိုရပြီ
ငါသည်ငါ့ 2020 ခုနှစ်ဘင်ဂိုကစားပေါ်လ hexing ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
- ချီလီ BLM ACAB ️‍ (@orbitingoccult) ဇူလိုင်လ 19, 2020
ထိုမိန်းမသည်လ hexing ရဲ့
- skoog (@Skoog) ဇူလိုင်လ 19, 2020
ချိုး: လ hex
woke: နေကိုရိုက် pic.twitter.com/fSumv8UH62
- Junkyard XIV (@the_diabeasty) ဇူလိုင်လ 21, 2020
စုန်းက hex ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လ pic.twitter.com/RtvQGzjRfd
- ⤝ kayla frankokru ⤞ (@BeccaFrankokru) ဇူလိုင်လ 21, 2020
ဦး hex လနှင့် hex လနှင့် hex လကို hex
- anhyu (@anhyuwu) ဇူလိုင်လ 21, 2020
၁၇။ သူငယ်မနားမထောင်ပါ၊ သူငယ်လ၊
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလပေါ်မှာ hex ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ fae နဲ့အခြားသမုဒ္ဒရာနတ်ဘုရားတွေဟာတကယ်ကိုတော်တော်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုအချိန်ထိ crystals တွေကိုရပ်တန့်သင့်တယ် (သို့) အသုံးပြုသင့်တယ်။ pic.twitter.com/A6AyoKYQaQ
- ဟေးလ် (@hale_tobin) ဇူလိုင်လ 21, 2020
“ လကို hexing နမ်းနေရင်ဘာလုပ်မှာလဲ🥺
မဟုတ်ရင် ... ?
- Tom Haynes (@T_Haynesy) ဇူလိုင်လ 21, 2020
ဓာတ်ပုံ (တည်းဖြတ်မှုမတိုင်မှီ) Altinay Dinc အပေါ် ရေဖြန်း
• မင်းကိုချိုးဖောက်မိလို့ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အချိန်ကုန်ခံနေရတာကပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒဏ္MYာရီပါ
• 'ဒါဟာလုံခြုံတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်' - တရားမ ၀ င်တရားမ ၀ င် coronavirus raves အတွင်း၌ရဲများကပိတ်ပစ်ခြင်းခံရသည်